Igumbi elincane elihle, buka i-Rigi mountain - I-Airbnb
Igumbi elincane elihle, buka i-Rigi mountain
Adligenswil, Luzern, i-Switzerland
Ikamelo e-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ibungazwe ngu-Hannah
Leli gumbi elise-Adligenswil, idolobhana lemvelo eliseduze nesikhungo saseLuzern (ukushayela imizuzu eyi-10). Ilungele abahambi abangabodwa noma umbhangqwana. Ilungele wena uma ufuna ukujabulela ukudla ngaphandle, ngeke upheke ngesikhathi seholide lakho (ALIKHO IKHISHI).
Kukhona indawo yokugezela yangasese encane, iWC kanye nokungena kuvulandi ojwayelekile wendlu, ubuka intaba yaseRigi ☺️.
*** ayifaneleki uma umude kuno-1m 85😊(isitayela sendlu yendabuko).
Zihlole ngokwakho ngebhokisi lokhiye.
* I-Wifi imahhala. Sizokunikeza igama lomsebenzisi nephasiwedi uma ufika.
* Indawo yokupaka imahhala, ngaphambi nje kwendlu.
* Sikunikeza ithawula lokugeza elisha ngomuntu ngamunye ngokungena. Ishampoo, ukhilimu wokugeza, insipho yesandla nakho kuyahlinzekwa.
4.76 · 404 okushiwo abanye
Abantu bendawo lapha bahle kakhulu futhi banobungane.
Imvelo eluhlaza izungeze indlu, ungathatha isikhathi sakho sokuhamba ngezinyawo ukuze ujabulele umoya ohlanzekile.
Kukhona isitolo sekhofi kanye nesuphamakethe eduze, ungafika lapho ngezinyawo.
Ngalesi sikhathi esibucayi seCorona, sivumela izivakashi ukuthi zizihlole, ziphume. Uma unenkinga nemibuzo, sizozama konke okusemandleni ethu ukukuxazululela yona ngokushesha okukhulu.
* Uma ufuna ukuba nolwazi mayelana nohambo lwakho, singakusiza ukuthi ube nemibono lapho ongaya khona, izindawo zokudlela ezihamba phambili edolobheni.
Ngalesi sikhathi esibucayi seCorona, sivumela izivakashi ukuthi zizihlole, ziphume. Uma unenkinga nemibuzo, sizozama konke okusemandleni ethu ukukuxazululela yona ngokushesh…
Hlola ezinye izinketho ezise- Adligenswil namaphethelo